Exclusive: West edges towards punishing Myanmar army leaders over Rohingya crisis – sources – CRM
Posted on October 9, 2017 Author swelsone	Comment(0)
YANGON/WASHINGTON (Reuters) – The European Union and the United States are considering targeted sanctions against Myanmar military leaders over an offensive that has driven more than 500,000 Rohingya Muslims out of the country, officials familiar with the discussions say.
The EU Foreign Ministers Council will discuss Myanmar on Oct. 16, although officials do not expect any move on sanctions that soon. Danish minister for development cooperation, Ulla Tornaes, told Reuters that Copenhagen had been working to get the crisis on the agenda, “with the wish to put further pressure on the military”.
Two Washington-based U.S. officials with knowledge of the Trump administration’s Myanmar deliberations said targeted sanctions against commander-in-chief Min Aung Hlaing and several other generals, as well as leaders of ethnic Rakhine Buddhist militias accused of torching Rohingya villages, were under consideration.
Such sanctions – if decided on – would likely entail U.S. asset freezes, bans on travel to the United States, prohibitions against Americans doing business with them and other unspecified penalties. Washington was moving cautiously as it consulted with governments in Europe, Japan and Southeast Asia, the U.S. officials said.
Myanmar’s relations with the U.N. have grown increasingly testy since the discovery of World Food Programme-branded biscuits atasuspected militant camp in July prompted the government to accuse the U.N. agency of supporting the insurgents, forcing it to shut down its operations in Rakhine.
Thaung Tun, Suu Kyi’s National Security Advisor, told Reuters that the U.N. “must treat us equally”.
The Malaysian Armed Forces (MAF) is ready to join the humanitarian mission to help the Rohingya community in Rakhine, Myanmar, if required, says its chief General Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor. Raja Mohamed Affandi said the MAF wasawell equipped organisation with extensive experience in humanitarian missions globally, and hadadedicated battalion […]
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်နဲ့တခြားလူနည်းစုတွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့် အရေးကောင်စီမှာ ဒီကနေ့အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။ မနေ့တုန်းကတော့ အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူ ရတဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတာတွေကို ဒီအစည်းအဝေးခေါ်ယူဖို့အဆို တင်သွင်းကြတဲ့နိုင်ငံတွေက ရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ကိုကျော်အောင်လွင်က ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက တခြားလူနည်းစုတွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး ဆွေးနွေးကြဖို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံတွေပါ။ သူတို့ရဲ့အဆိုတင်သွင်းမှုကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း၇၃ကလည်း ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာ ၃၃နိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပါ။ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ အဖွဲ့ဝင် ၄၇ နိုင်ငံရှိပြီး၊ အထူးစည်းဝေးပွဲခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အနည်းဆုံး အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထောက်ခံမှု သုံးပုံတပုံ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး ၁၆ နိုငိငံရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့ လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီနီဗာက ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံအမတ် M Shameem Ahsan ကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကိုရောက် လာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဦး ရေစုစုပေါင်းက တသန်းလောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ “သြဂုတ်လ […]
Exclusive – EU may shun Myanmar generals in new sanctions: draft
Posted on October 26, 2017 Author swelsone